एप्पलको ब्याट्री समस्याको लागि नयाँ प्याटेन्ट प्रभावशाली छ! - स्मार्टमे
स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरू प्राय: ब्याट्रीसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरूको गुनासो गर्छन्। एप्पलले एक नवीन प्रणाली शुरू गरेर थोरै यसको समाधान गर्ने निर्णय गर्यो। यो के हो?
एप्पलको नवीन प्याटेन्ट
नयाँ प्याटेन्टले एक प्रणाली वर्णन गर्दछ जुन व्यक्तिगत उपकरणमा ब्याट्री चार्ज गर्ने र डिस्चार्ज गर्ने प्रयोगकर्ता बानीहरूको विश्लेषण गर्न सक्दछ।
यसका लागि धन्यबाद, यसले हामीलाई अवस्थाहरू विरूद्ध चेतावनी दिन सक्छ जहाँ ब्याट्री चाँडै नै सकित हुन सक्छ। प्रणालीले हामीलाई भन्नेछ जब यो तपाईंको स्मार्टफोनको रिचार्ज गर्न उत्तम हो।
प्याटेन्टले अधिसूचनाहरू आईफन सम्बन्धित अन्य उपकरणहरूमा प्रदर्शित हुन्छ भनेर पनि मान्दछ। यद्यपि यो याद राख्नुपर्दछ कि केवल पेटन्टको अधिग्रहणको अर्थ यो होइन कि यसले लेखमा वर्णन गरिएका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। तर तथ्य यो हो कि तपाईले एप्पलको चतुराईको कदर गर्नु पर्छ र हामी हेर्नेछौं कि यसबाट के आउँछ भने लामो दौडमा।
यस वर्षको iMac inch२ इन्च स्क्रीनको साथ छ?
हामी वेबमा पुनः डिजाइन गरिएको iMac बारेमा लामो समयदेखि जानकारी प्राप्त गर्दैछौं। सम्भवतः, एप्पल स्थिरबाट नयाँ कम्प्युटर यस बर्षको पछि बिक्रीमा हुनेछ। यो WWDC को अर्को संस्करणको समयमा प्रस्तुत गर्न सम्भव छ। नयाँ आईम्याक ...
एप्पल नयाँ प्रोसेसर तयारी गर्दैछ। महान प्यारामिटरहरू!
स्याऊ, स्याउ m2
एप्पल "M" लाइनबाट यसको प्रोसेसरको दोस्रो जेनेरेशन तयार गर्न तयारी गर्दैछ। पहिलो चिप प्रदर्शन र ऊर्जा दक्षताको हिसाबले एकदम सफल थियो, र M2 को साथ, यो मात्र राम्रो प्राप्त गर्न सक्दछ। राम्रो प्रदर्शन! भर्खरको जानकारी ...
हामीलाई WWDC 2021 को मिति थाहा छ। यस समय एप्पल के तयारी गर्दैछ?
स्याऊ, iOS, iPadOS, MacOS, watchOS, wwdc 2021
कपर्टिनोबाट आएको कम्पनीले भर्खरै डब्ल्यूडब्ल्यूडीडीसी २०२१ घटनाको मिति पुष्टि गरेको छ, जुन विकासकर्ताहरू उत्सुकताका साथ पर्खिरहेका छन्। यो सोमबार, जून on मा हुनेछ, र अनलाइन को रूप लिन्छ, चल कोरोनाभाइरस महामारीको कारण। के ...
त्यहाँ त्यस्तो अध्ययन भएको छैन। WSB मा एप्पल!
स्याऊ, स्टुडिया, wsb
यस्तो पहिले कहिल्यै भएको थिएन। व्रोकवामा डब्ल्यूएसबीमा, एक दिशा खोल्ने निर्णय गरिएको थियो जुन एप्पल टेक्नोलोजीको पूर्ण रूपमा चिन्ता गर्दछ। कस्तो आविष्कार! एप्पल नयाँ प्रवृत्ति सेट गर्दछ! अध्ययनको क्षेत्रको नाम "एप्पल प्लेटफार्म प्रोग्रामिंग र प्रशासन" हो। स्टुडियोहरू खोलिएका थिए ...
एप्पलले म्याक प्रोसेसरहरू गति दिन्छ। कुल नवीनता
स्याऊ, मैक, procesory
एप्पलले आफ्नो कम्प्युटरहरूको लागि प्रोसेसरको विकासको गतिलाई सुरू गर्न सुरू गरिरहेको छ - यो धेरै विदेशी वेबसाइटहरूमा पढ्न सकिन्छ। ग्राहकहरूले यसैले पुष्टिकरण प्राप्त गर्दछन् कि म्याकहरू एप्पलका लागि महत्त्वपूर्ण तत्व हुन्, जुन यसका फ्यानहरूका लागि ठूलो समाचार हो।
एप्पलले आईओएस १ and र म्याकोस १२ को नाम पुष्टि गर्दछ
स्याऊ, iMac, iOS
तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ, एप्पलले डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी २०२१ - आईओएस १ and र म्याकोस १२ मा दुई नयाँ प्रणालीहरू देखाउने विचार राखेको छ। दुबै नाम वेबकिटमा देखिएका छन्, र दुबै प्रणालीको घोषणा जूनमा अपेक्षित गर्न सकिन्छ। अवश्य ...
एक टिप्पणी थप्नुहोस् जवाफ रद्द
आफ्नो इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिनेछ। पूरा हुनुपर्छ भनेर क्षेत्रहरू मार्क * *
अर्को टिप्पणीहरू लेख्दा ब्राउजरमा मेरो डाटा सम्झनुहोस्।